Help Me Grow Network • Help Me Grow WA
Barnaamijka Help Me Grow ee Washington waa shabakad ka kooban bulshooyin ku kala baahsan Washington oo wada shaqeeya si ay u dhisaan meegaar khayraad ku saabsan adeegyada iyo taageerada bulshada. Barnaamijka Help Me Grow waxuu dhegeystaa qoysaska, waxuu iyaga la xiriiriyaa adeegyada waxuuna siiyaa taageero joogto ah.
Shabakadda barnaamijka Help Me Grow ee Washington waxaa ku jira isbaahaysiga sii kordhaya, awood leh ee bulshooyin iyo shakhsiyaad u hoggaansan nidaam carruurnimo hore oo hammad badan oo wax xalliya oo sida ugu badan ugu faa'iideeya dhammaan qoysaska iyo carruurta.?
Maabkani waxuu muujinayaa halka ay Washington ka joogaan gacansaarleyaasha hoose ee waqtiga xaadirka ah. Gacansaarleyaasha hoose waxay iskugu jiraan ururro iyo dad degaanka hormood uga ah horumarka carruurta ee caafimaad leh waxayna masuul ka yihiin in ay degaanka ama xaafadda ka hirgaliyaan barnaamijka Help Me Grow. Guji degmadaada si aad war dheeraad ah uga hesho cidda ku lug leh shaqada ka socota bulshadaada. Gacansaarleyaasha hoose waxaa ka mid ah ama ay is kaashadaan isbaahaysiyada waxbarashada hore ee Washington. Haddii aad danaynayso in aad hesho war dheeraad ah oo ku saabsan isbaahaysiga waxbarashada hore (early learning coalition) ee degaankaaga, fadlan booqo barta internetka Washington Communities for Children.
Help Me Grow ee Gobolka Washington
Help Me Grow Island County
Help Me Grow King County
Help Me Grow Degmada Pierce
Wac 211 oo weydii Help Me Grow
Help Me Grow San Juan County
Help Me Grow Skagit
Help Me Grow Degmada Snohomish
Help Me Grow Degmada Whatcom
Help Me Grow Bartamaha WA
Gobolka San Juan
Degmooyinka Yakima & Kittitas
Dhammaan Degmooyinka kale ee WA
Shabakadda waxaa ku jira xubnaha bulshada heerka degaanka, heerka degmada, iyo gobolka oo dhan. Nidaamka barnaamijka Help Me Grow ee Washington waxuu leeyahay heer kaloo lagu shaqeeyo oo lagu magacaabogacansaarleyaal. Halkan hoose ka hel war dheeraad ah oo ku saabsan gacansaarka hoose (sub-affiliation).
Hadda ma tahay Gacansaarle? Halkan ka gal